बिहीबारदेखि हिमपात र वर्षा
समाचारबुधबार, २३ माघ , २०७५
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहीबारदेखि देशभर हिमपात र वर्षा हुने बताएको छ। बुधबार सन्देश जारी गर्दै विभागले पहाडी क्षेत्रका सानासाना खोलामा नदीको बहाब बढ्न सक्ने र हिमपहिरो जान सक्ने बताएको छ।
केही दिनयता लागेको चर्को घामले हावा तातेर ‘न्यून चापीय क्षेत्र’ तयार भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। तातो हावा अन्यत्र लागेपछि त्यस स्थानमा हावाको चाप कम हुन्छ, जसलाई ‘न्यून चापीय क्षेत्र’ भनिन्छ। हावा तातेपछि जमीनको सतहबाट उडेर माथिमाथि जाने वा चिसो हावा भएतिर बहने हुन्छ।
हावाको चाप कम भएकाले अरब सागरबाट आउने पश्चिमी वायु नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। जाडोयाममा हावा चिसो हुने हुँदा गह्रौं भएर बसिरहने भएकाले यसको प्रवाह अर्थात् अर्को ठाउँमा हावा स्थानान्तरण हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर, अहिले केही दिनयता चर्केको घामले तातो हावा पूर्वतिर गइरहेको मौसमविद्हरु बताउँछन्। यसरी निर्माण भएको खाली ठाउँ भर्न पश्चिमी समुद्रबाट पानीको बाफ बोकेर आएको हावा नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेपछि हिमपात र वर्षा हुने भएको हो।
पश्चिमी हावा सधैंभरी पानीको बाफ बोकेर आउने चाहिँ होइन। कहिलेकाहीं मनसुनका लागि बंगालको खाडीबाट आउने हावा पनि सुख्खा अर्थात्. पानी रहित भएर आउँछ भने पश्चिमबाट आउने हावामा पानीको बाफ हुने सम्भावना मनसुनी वायुमाभन्दा निकै कम हुन्छ। तैपनि यसपाली वाफयुक्त हावा पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरिरहेकाले यहाँ वर्षात् हुने पुर्वानुमान गरिएको विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले बताए।
शर्माका अनुसार, यो वर्ष सामान्य भन्दा बढी हिमपात र वर्षा भएको छ। नेपालमा हिमपातको तथ्यांक मापन गर्ने प्रविधि नभएकाले के कति हिमपात भयो भनेर आँकडामा भन्न कठीन भए पनि यो वर्ष सामान्यभन्दा ज्यादा हिमपात भएको उनले बताए। ‘१०–२० वर्षमा एक पटक यस्तो घटना हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकपटक परेको हिउँ पग्लन सुरु नगर्दै फेरि हिमपात हुने अवस्था देखिएको मात्र होइन, वर्षाैंसम्म हिउँ नदेखिने भूभागमा पनि यो वर्ष बाक्लो हिउँ देखिएको छ।’
हिमपात बढी हुँदा यो वर्ष ठूला र हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदीनालामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। हिउँ पग्लेर खोलामा पानी बढ्यो भने यो वर्षको सुख्खायाम अर्थात् फागुनदेखि असारसम्ममा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले अघिल्ला वर्षहरुभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छन्। यसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सघाउ पु¥याउँछ। हिउँदे वर्षा पहाडी र तराई क्षेत्रमा पनि बढी हुने पूर्वानुमान विभागको छ।
तत्कालका लागि भने ‘हाई अल्टिट्युट’मा ट्रेकिङ जान, खोलानालामा वा पहिरोको जोखिम हुने स्थानमा जाँदा होस पु¥याउनुपर्ने विभागको सचेतना सन्देशमा उल्लेख छ। शनिबारबाट वर्षा र हिमपात घट्ने र आइतबारदेखि मौसम सफा हुने महाशाखाले जनाएको छ।